Trano Kambana amin'ny fomba skandinavianina, famolavolana efitrano ho an'ny ankizy toy izany, tena tsara! - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Trano kambana haingo skandinavianina, endrika ankizy ho an'ny efitrano toy izany, tsara loatra!
2021 / 06 / 12 FisokajianaInterior design 9461 0
Ny fomba Nordic
Ny fomba Nordic dia manondro ny endrika endrika kanto any Norvezy, Danemark, Suède, Failandy ary Islandy any avaratr'i Eropa. Ny fomba Nordic dia miavaka amin'ny fahatsorana, natiora ary ny maha-olombelona. Amin'ny famolavolana anatiny, ny fomba Nordic dia mety hahatonga ny olona hahatsapa ny hatsaran'ny fanakaikezana ny natiora, ny maha-olona ary ny fahatsorana avy amin'ny faka.
Amin'ity tranga ity avy amin'ny Beiou Design any amin'ny faritanin'i Taiwan, ny tonon'ny habakabaka dia mampiasa fotsy madio, miaraka amin'ny fanaka miloko fotsy sy mena mba hamoronana rivo-piainana voajanahary sy vaovao. Ny fisongadinana lehibe indrindra amin'ny endrika dia ny fitsaboana ny efitranon'ireo ankizy. Ireo rahalahiny kambana dia naniry ny toerana tsy miankina aminy, saingy tsy te hatory mitokana izy ireo, noho izany dia namorona hevitra momba ny famolavolana novela ilay mpamorona.
Foyer dia feno fotsy madio rehefa miditra ao an-trano ianao. Milamina sy mirindra ny fahitana azy, nefa koa manana asa sy fitehirizana maro. Na dia bitika kely aza ny foyer dia ampiasaina matetika kokoa izy io.
Ny habaka anatiny dia natao miaraka amina endrika misokatra hampifandray ny habaka ampahibemaso. Ny efitrano fandraisam-bahiny, ny fianarana, ny efitrano fisakafoanana ary ny lakozia dia misokatra amin'ny fifampiresahana ary ny rindrina miendrika U dia mizara ny fianarana ho faritra tsy miankina tsy misy fanaka be loatra sy famolavolana, mba hahafahan'izy mirahalahy mianatra sy mamaky am-pilaminana.
Ny efitrano fisakafoanana sy ny lakozia koa dia mifantoka amin'ny toetra ara-tsosialy. Misokatra lakozia, nosy misy latabatra fisakafoana. Ny seho rehetra dia aloky ny fiainana tsara, mahandro sy misakafo amin'ny hehy ataon'ny fianakaviana.
Ny chandelier varahina eo ambonin'ny efitrano fisakafoana dia lantona mamirapiratra ao amin'ny efitrano.
Ao ambadiky ny fandalinana no misy ny efitranon'izy mirahalahy. Nampiasa fanaka manokana ny mpamorona mba hamoronana toerana kely roa misaraka ho azy ireo. Izy io dia mahazaka fizarana fandriana na tsy fizarana efitrano. Eo ambanin'ny fandriana no misy ny efitrano fanazaran-drahalahy mirahalahy ho an'ny zavamaneno tsirairay avy.
Ny sakan'ny tohatra sy ny lalantsara dia tsy mahazaka olona iray handalovana fotsiny. Ny efitranon'ny ankizy dia natao miaraka amina toerana malalaka lehibe natokana ho an'ny jiro. Na dia toa matevina aza ny fanaka dia tsy misy fiatraikany amin'ny hazavana sy ny rivotra amin'ny fomba rehetra. Izy io dia ohatra tena mahomby amin'ny famolavolana ny efitranon'ny ankizy.
Etsy andanin'ny efitrano dia misy ny efitrano fatoriana tompony, izay mila mandalo ny fianarana aloha.
Ny latabatra miendrika L dia mahafeno ny fepetra takian'ny biraon'ny mpivady isan'andro. Amin'izany fandalinana fotsy madio izany dia mety hahatratra fotoana iray hisaintsainana ara-panahy, ary ny fotoana tsy lanina amin'ny ankizy dia toa tena tsara eto.
Ny efitrano fatoriana dia misaraka amin'ny fandalinana amin'ny rindrina misy varavarankely voaravaka. Ny varavarankely fitaratra dia mitondra tara-masoandro ao anaty efitrano, ary ny mpankafy misokatra eo an-tampony dia manatsara ny rivotra ao amin'ny efitrano fatoriana.
Ny efitrano fidiovana sy ny efitrano fidiovana dia milahatra amin'ny lafiny iray amin'ny efitrano fandriana, ary ny lalantsara eo an-tampony dia manosika ny varavarana sy ny fanidiana ny varavarana roa, izay tena mahavonjy habakabaka.
Ny fizarazarana maina sy lena amin'ny trano fidiovana lehibe dia mahafeno ny asan'ny fandroana ihany koa.
Ny efitrano fidiovana faharoa dia somary malalaka ary ny faritra miasa dia milahatra mifandimby, ka mahatonga azy io tena ahazoana aina.
Previous :: Sahirana, mpanaingo no nanome ireto famolavolana vavahady manaitra ireto Next: Ny hatsaran'ny fahatsorana sy ny famerana, kitiho ny bokotra fiatoana kely ho an'ny famolavolana OPS OPS
2021 / 08 / 15 3189
2021 / 08 / 15 4063
2021 / 08 / 14 3313
2021 / 08 / 14 3732
2021 / 08 / 14 3133